Makoa (malagasy) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Makoa)
Ny Makoa dia foko malagasy monina ao amin' ny morontsiraka avaratra andrefan' i Madagasikara. Ny mponina ao ampovoan-tanin' i Madagasikara dia miantso azy ireo hoe Masombika. Taranak' olona banto (Makoa ao Afrika) namidy ho andevo aty Madagasikara ny ankamaroan' izy ireo, izay nentin' ny mpivarotra andevo avy any Môzambika nankanty Madagasikara tamin' ny taonjato faha-18. Na dia mihazona ny maha izy azy manokana aza ny Makoa eto Madagasikara dia matetika mifangaro amin' ny Vezo (izay heverina fa ao amin' ny vondrom-poo sakalava). Eo amin'ny 1 %n' ny mponin' i Magadasikara ny Makoa. Amin' ny ankapobeny dia lava kokoa noho ny ankamaroan' ny Malagasy ny Makoa, ka noho izany dia izy ireo no nosafidin' ny mpanjana-tany frantsay hatao pôlisy na miaramila.
Lakana nentim-paharazana môzambikana
1 Ny mampiavaka ny Makoa
2.2 Faha fananjanahan-tany
3 Fiarahamonina sy kolontsaina makoa
4.3 Makoa any ivelan' i Madagasikara
Ny mampiavaka ny MakoaHanova
Ny Makoa (izay antsoina hoe Masombika ao Antananarivo sy ny manodidina) dia vondrom-poko eto Madagasikara, taranak' ireo olona namidy ho andevo nampidirina avy amin' ireo seranan-tsambo fanondranana andevo ao amin' ny tapany avaratr' i Môzambika, izay faritra onenan' ny Makoa afrikana maro. Izy ireo no zanaka am-pielezana niforona farany vokatry ny fivarotana andevo. Indraindray izy ireo dia sokajina ho zana-pokon' ny Vezo (izay foko ao amin' ny vondrom-poko sakalava) na Sakalava, nefa manana ny maha izy azy manokana izy ireo, dia ny vatany lava sy vaventy ka nampiasan' ny mpanjana-tany frantsay azy ireo ho pôlisy na miaramila. Akehitriny ny teny hoe Makoa dia tsy enti-manondro ny taranaky ny Makoa avy any Afrika ihany fa ireo tena mainty fihodirana sy matanjaka.
Ny fivarotana andevo dia loharanon-karena lehibe ho an' ireo mpanjaka teto Madagasikara nanomboka tamin' ny taonjato faha-16, raha tonga tao amin' ny tapany andrefan' i Madagasikara avy any Môzambika ny vahoaka voalohany. Tsy andevo anefa izy ireo fa mpifindra monina nitady toeram-ponenana eto Madagasikara noho ny fandosirana ny fivarotana andevo izay nandravarava tao amin' ny morontsiraka atsinan' i Afrika. Ny seranan-tsambo lehibe indrindra ho an' ny raharaham-barotra andevo tao Môzambika dia hita tao avaratra, izay faritra nonenan' ny Makoa, ary na dia tsy Makoa avokoa ny andevo naondrana avy amin' ireo seranana ireo dia nanondroana ny andevo rehetra naondrana avy ao amin' io faritra io ny anarana hoe Makoa. Mpanondrana andevo indrindraindrindra i Madagasikara satria ny mpanjaka dia nivarotra ireo Malagasy mpiray tanindrazana aminy voasambotra mandritra ny ady sady nisy ny fangalarana olona hatao andevo avy amin' ny tanàn' ny fahavalo, hamidy amin' ny mpanao raharaham-barotra eorôpeana sy arabo. Tamin' ny taona 1819, ny mpanjaka Radama I nanapaka ny Fanjakan' Imerina, izay nanjaka tamin' ny roa ampahatelon' i Madagasikara, dia nanafoana ny fanondranana ny andevo malagasy araka ny fangatahan' ny Britanika. Ny fitadiavana andevo aty Madagasikara anefa tsy nihena, ka nahatonga ny fivarotana ny andevo miasa an-trano hameno isa ireo andevo nosamborina mandritra ny ady nataon' ny tafika merina tany amin' ireo faritany amorontsiraka niaraka tamin' ireo naondrana avy any Môzambika, ka nitombo izaitsizy vokatr' izany ny fivarotana andevo makoa antsokosoko nandritra ny taonjato faha-19. Ny tanànan' i Maintirano, izay miorina eo anelanelan' i Mahajanga sy i Morondava eo amin' ny morontsiraka andrefana, dia toeram-pifanakalozana lehibe momba ny fanondranana andevo môzambikana antsokosoko. Nitotaly 650 000 any ho any ny Makoa naondrana avy any Môzambika nankaty Madagasikara, ka nay 30 %n' izany dia navarotra indray mankany amin' ireo nosy hafa ao amin' ny tapany andrefan' ny Ranomasimbe Indiana.
Tamin' ny 20 Jona 1877 ny piraiminisitra Rainilaiarivony tamin' ny fanapahan' ny mpanjakavavy Ranavalona II dia namoaka lalàna nanafahana ny andevo makoa rehetra. Makoa miisa 150 000 any ho any no nafahana tamin' ireo tany fehezin' ny Merina, fa tany amin' ny tany ivelan' izany kosa dia nitohy ny fivarotana andevo tsy ara-dalàna. Ny tanànan' i Morondava, tamin' ny fitondrana merina, dia nandidy ny hamotsorana ny andevo makoa, izay nivondrona mba hamorona ny vakin-tanànany tao amin' ny tanànan' i Morondava sady nanorina tanàna ambanivohitra maro manodidina an' i Morondava. Ireo andevo makoa tany amin' ny faritra tsy nofehezin' ny Merina nefa afaka nandositra ny tompony dia nankany Morondava mba hiara-monina amin' ireo namany nahazo fahafahana. Maro ireo nanatona ny Fikambanana Misionera Norveziana (Norwegian Missionary Society - NMS) izay niasa tao Morondava tamin' ny fiafaràn' ny taonjato faha-19. Tamin' ireo taona 1880 dia Makoa maro no nangataka ny fanampian' ny misionera norveziana mba hanampy amin' ny fampodiana azy ireo any Môzambika. Tanatin' ny telopolo taona mahery dia maro ireo Makoan' i Morondava izay nanao fandaminana tamin' ny fodiana any Môzambika, ka notanterahin' izay ireo izany tamin' ny alalan' ny fanamboarana sambo, na tamin' ny alalan' ny fanamborana lakan-drafitra, na tamin' ny alalan' ny fanangonam-bola hiondranana an-tsambo. Ny firaketana norveziana dia manambara fa nisy ihany ny Makoa tafaverina somantsara tany Afrika. Nitohy ny fanondranana andevo makoa avy amin' ny ampahan' ny morontsiraka andrefana tsy nofehezin' ny Merina, mandra-pahatongan' ny fanjanahan' ny Frantsay an' i Madagasikara tamin' ny taona 1896 izay nandrara ny endri-panandevozana rehetra teto amin' ny Nosy.
Nandritra ny vanimpotoan' ny fanjanahan-tany, ny fiainan' ny mponina tao amin' ireo tanàna madinika makoa dia nahitana taratra ny fifikirana mafy sy maharitra teo amin' ny fomba amam-panao makoa navela tany Môzambika: ny fiteny, ny dihy, ny mozika, ny sakafo, ny angano sy ny singan-kolontsaina maro dia niseho miharihary. Ny mponina tao amin' ireo tanàna madinika dia nanamboara fanaka, firavaka, vilia sy vilany, zavamaneno (indrindra ny amponga) izay mitovy amin' izay hita any Môzambika. Misy fanao ara-kolontsaina makoa izay noraisin' ny vahoaka sakalava mpifanila aminy, ka isan' izany ny tobokavatsa atao amin' ny tava sy ny vatana.
Nosafidin' ny mpanjana-tany frantsay hatao pôlisy na miaramila ny lehilahy makoa noho izy ireo lava sy vaventy kokoa noho ny ankamaroan' ny Malagasy.
Ankehitriny dia tonga lehibe ny tanànan' ny Makoa sy ny vakin-tanànany sady mitahiry ny maha izy azy sy ny mampiavaka azy amin' ny vahoaka hafa manodidina, na dia nevelan' izy ireo na efa hadinony ny ankabetsahan' ny fomba amam-panaony. Eo amin'ny 1 %n' ny Malagasy ny Makoa ankehitriny.
Fiarahamonina sy kolontsaina makoaHanova
Tao amin' ny fiarahamonina makoa taloha dia nisy rafitra nahitana sarangam-poko telo nipoitra tamin' ny fakany tahaka ny rafitra nisy teo amin' ny fiarahamonina malagasy hafa. Mandrakariva ny tompon' andevo dia nanendry ny lehiben' ny Makoa, izay notondroina amin' ny anaram-boninahitra hoe ampanjaka ("mpanjaka"), sady nanavaka ireo andevo manana sata ambony sy manana sata ambany.
Makoa any ivelan' i MadagasikaraHanova
Makoa (vahoakan' i Afrika)
↑ Klara Boyer-Rossol et Aminata Aidara, "Réinvestir le sacré" [tahiry], sur Africultures, 1er juillet 2014 (notsidihina tamin’ ny 5 Mey 2019)
↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 et 2,5 Boyer-Rossol, Klara (2 Jolay 2014). "Réinvestir le sacré: Musiques, paroles et rites chez les anciens captifs déportés de l'Afrique orientale à Madagascar XIXe-XXe siècles". Africultures.com.
↑ Bradt & Austin 2007, p. 27.
↑ 4,0 et 4,1 Rakotomalala, Malanjaona; Razafimbelo, Celestin (1985). "Le problème d'intégration sociale chez les Makoa de l'Antsihanaka" (PDF). Omaly Sy Anio. 21–22 (1): 93–113.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Makoa_(malagasy)&oldid=1011003"
Dernière modification le 25 Aprily 2021, à 07:52
Voaova farany tamin'ny 25 Aprily 2021 amin'ny 07:52 ity pejy ity.